China Customs Union- EAC, GOST-R Sevhisi uye Kuyedza | MCM
Chii chinonzi GOST-R Kuzivisa?
GOST-R Chiziviso cheConformity igwaro rekuzivisa kuratidza kuti zvinhu zvinoteererwa nemitemo yekuchengetedza yeRussia. Pakaburitswa Mutemo weChigadzirwa uye Certification Service neRussia Federation muna 1995, yekumanikidza yechigadzirwa chitupa sisitimu yakatanga kushanda muRussia. Zvinoda kuti zvigadzirwa zvese zvinotengeswa mumusika weRussia kuti zvidhindwe neGOST inosungirwa chitupa chiratidzo.
Seimwe yenzira dzekusungirwa kuenderana chitupa, Gost-R Chiziviso cheConformity mabheseni pamishumo yekuongorora kana yehutano manejimendi sisitimu. Uye zvakare, Chirevo Chekuenderana chine hunhu hwekuti chinogona kupihwa chete kubazi rezvemitemo reRussia zvinoreva kuti anenge achinyorera (muridzi) wegwaro anogona kungova kambani yakanyoreswa zviri pamutemo yeRussia kana hofisi yekune dzimwe nyika yakanyoreswa muRussia.
OSTGOST-R Kuzivisa Rudzi uye Ukoshi
1. Single Shudyu Certifiketi
Chitupa chega chekutakura chinongoshanda chete kune yakatarwa batch, yakatarwa chigadzirwa chakatemwa muchibvumirano. Ruzivo rwakananga rwuri pasi pekutonga, senge zita rechinhu, huwandu, kudomwa, chibvumirano uye mutengi weRussia.
2. Certificate nekuvimbika kwe gore rimwechete
Kamwe chigadzirwa chikapihwa chitupa, vagadziri vanogona kutumira zvigadzirwa kuRussia mukati megore rimwe pasina muganho wenguva yekutumira uye huwandu kune chaiwo mutengi.
3. Certifiketi nekuvimbika kwe makore matatu / mashanu
Kamwe chigadzirwa chikapihwa chitupa, vagadziri vanogona kutumira zvigadzirwa kuRussia mukati memakore matatu kana mashanu pasina muganho wenguva yekutumira uye huwandu kune chaiwo mutengi.
● MCM ine boka remainjiniya kuti vadzidze zvirevo zveRussia zvazvino, kuverengera ichangoburwa GOST-R chitupa nhau dzinogona kugoverwa nemazvo uye nenguva nevatengi.
● MCM inovaka kubatana kwepedyo nenzvimbo yekutanga-yakamisikidzwa chitupa sangano, ichipa yakatsiga uye inoshanda chitupa sevhisi kune vatengi.
Chii chinonzi EAC?
Maererano ne Tiye Inoshanda Inowirirana Criteria uye Mitemo yeTechnical Mitemo yeKazakhstan, Belarus neRussia Federation chinova chibvumirano chakasainwa neRussia, Belarus neKazakhstan musi waGumiguru 18, 2010, Komisheni yeCustoms Union ichazvipira kuumba muyero yunifomu uye chinodikanwa chekuona kuchengetedzwa kwechigadzirwa. Chimwe chitupa chinoshanda kune nyika nhatu, dzinoumba chitupa cheRussia-Belarus-Kazakhstan CU-TR chine yunifomu yekumaka EAC. Mutemo wakaiswa mukushanda zvishoma nezvishoma kubva munaFebruary 15th 2013. MunaNdira 2015, Armenia neKyrgyzstan dzakabatana neCustoms Union.
▍CU-TR Chitupa Rudzi uye Ukoshi
Single Shudyu Certifiketi
Chitupa chega chekutakura chinongoshanda chete kune yakatarwa batch, yakatarwa chigadzirwa chakatemwa muchibvumirano. Ruzivo rwakananga rwuri pasi pekutonga, senge zita rechinhu, huwandu, chibvumirano chekambani uye mutengi weRussia. Kana uchinyorera chitupa, hapana sampuli dzinokumbirwa kupa asi magwaro uye ruzivo runodiwa.
Certifiketi ne kuvimbika of gore rimwechete
Kamwe chigadzirwa chikapihwa chitupa, vagadziri vanogona kutumira zvigadzirwa kuRussia mukati megore rimwe pasina muganho wenguva yekutumira uye huwandu.
Chitupa chine chokwadi che tatu gores
Kamwe chigadzirwa chikapihwa chitupa, vagadziri vanogona kutumira zvigadzirwa kuRussia mukati memakore matatu pasina muganho wenguva yekutumira uye huwandu.
Chitupa chine chokwadi chemakore mashanu
Kamwe chigadzirwa chikapihwa chitupa, vagadziri vanogona kutumira zvigadzirwa kuRussia mukati memakore mashanu pasina muganho wenguva yekutumira uye huwandu.
● MCM ine boka pf mainjiniya ekudzidza tsika yemubatanidzwa yazvino zvitupa zvirevo, uye kupa epedyo eprojekti yekutevera sevhisi, kuona kuti chigadzirwa chevatengi chinopinda mudunhu zvakanak uye zvinobudirira.
● Izvo zviwanikwa zvakaunganidzwa kuburikidza neindastiri indasitiri zvinoita kuti MCM ipe inoshanda uye yakaderera-mutengo sevhisi kune mutengi.
● MCM inovaka kubatana kwepedyo nemasangano anoenderana nenzvimbo, kuona kuti ruzivo rwechizvino-zvino rweCU-TR certification rwunogovaniswa nenzira kwayo uye nenguva.
Zvadaro: America, Canada- cTUVus & ETL
Gost R Chitupa
Wakashaikwa R Certification
Wakashaikwa R Certification Mutengo
Yakarasika R Certification Maitiro
Wakashaikwa R Certification Service
Wakarasika R Nguva Yekutungamira
Wakashaikwa R Quotation
Wakarasika R Chirevo
Wakashaikwa R Chinodiwa
Yakasarudzika R Tsanangudzo
Wakashaikwa R Matsamba Ehunyanzvi
Wakarasika R Unyanzvi Kudikanwa
Wakashaikwa R Bvunzo
Wakashama R Zvinhu Zvekuyedza
Yakarasika R Nzira Yekuyedza
Wakashaikwa R Bvunzo Chiitiko
Wakashaikwa R Kuedzwa
Wakashaikwa R Kuedza Lab
Yakatadza R Kuedza Laborator
Wakashaikwa R Mutengo Wekuyedza
Yakashaya R Basa Rokuyedza
Yakashaya R Nguva Yekuyedza
Wakashaikwa R Tr